I-Dayz Hacks 🥇 Ukukopa, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
Ukufumana ukufikelela kwii-DayZ hacks eziphambili, apha kuphela kwi-Gamepron. Sinikezela ngeDayZ Wallhack, iAimbot, i-ESP, iRadar, kunye nezinye izinto ukugcina abasebenzisi bethu bekulungele ukuthelekisa nabani na.
Sele uthenge i-DayZ Hack? Fumana amanyathelo alandelayo apha
Nceda uqaphele: Ngaphambi kokuba uthenge ii-DayZ hacks zethu, qiniseka ukuba isixhobo ojonge ukusithenga sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, oko kuthetha ukuba ungazisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu DayZ Hacks
I-DayZ Hacks, iAimbot, iNorecoil, i-ESP, iWall Hacks kunye nokunye
Intel lomnqweno yimfumba
Thenga DayZ IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha i-DayZ kwimidlalo eyahlukeneyo ekhoyo apha kwiGamepron
Khetha amanqaku okuzonwabisa ahambelana neemfuno zakho ngokusemgangathweni, amathuba okuba siyifumene le nto uyifunayo!
Hlawula usebenzisa iindlela zethu zokuhlawula ezikhuselekileyo
Thenga isitshixo semveliso yakho usebenzisa iprosesa yethu ekhethekileyo (nekhuselekileyo) yokuhlawula, efumaneka kuphela kwiGamepron
Fumana ukufikelela kwisitshixo sakho kwaye ukhuphele ukukopela
Emva kokuthenga isitshixo semveliso ungafikelela kwaye ukhuphele iseti yakho ye-DayZ!
Kutheni i-Gamepron DayZ hacks?
Ngu-Cooper Hollmaier-Uhlaziywe ngo-Agasti 10, 2021
Uhlaziyo lwe-1.13 lwe-DayZ lubonisa uluhlu olubanzi lwezixhobo ezintsha kodwa akukho nto iyatshintsha umdlalo ngaphandle kokukhutshwa kwemowudi yomlilo egqabhukileyo ecaleni kompu weM16. Umdlalo uphinde wabona ukumiliselwa kwamaphephancwadi amatsha amatsha kunye nezinto ezintsha ezinjengokuthanjiswa.
I-DayZ kutshanje ihlaziyiwe kwi-1.13, kwaye uhlaziyo longeze ezinye izinto kunye nezixhobo kumdlalo. Mhlawumbi olona phawu lubalulekileyo lolwe-M16A2 kunye nemowudi yayo yomlilo egqabhukileyo. Uhlaziyo longeze ii-machete ezahlukeneyo onokuzisebenzisa ukuphucula ukubonakala kwakho.
Ngokukhutshwa kohlaziyo lwe-1.12 lwe-DayZ, iBohemia Interactive yongeze uluhlu lwezixhobo ezitsha, kubandakanya irhengqa, imela yefange, imela ye-kukri, kunye nokunye. Umdlalo ngoku ubonakalisa amandla okususa izigcayiseli kwaye ungaqala nokusebenzisa izindlu zokugcina izityalo ukukhulisa izityalo kunye nemifuno.
I-Gamepron izakutshintsha indlela odlala ngayo i-DayZ, njengoko izixhobo zethu ezihamba phambili kushishino kuphela kwento oyifunayo ukuze uphumelele imidlalo emininzi. Ukuba nempumelelo ngakumbi kumdlalo onjengeDayZ kuhlala kuthatha ixesha, njengoko kufuneka wakhe izixhobo kunye nendawo yokuhlala ukuya kwindawo apho unokukhuphisana nabanye abantu. Ukuqokelela izibonelelo kunye nayo yonke loo nto ingenamsebenzi yinxalenye enkulu yomdlalo, kodwa ngokuqinisekileyo iyadika nayo-yiyo loo nto ufuna ukusebenzisa ii-DayZ hacks zethu, njengoko unokuthintela "ukugaya okukruqulayo" okunxulunyaniswa ukudlala. Iindawo ezilungileyo zalo mdlalo kulapho ulwa khona nabanye abadlali abaneZombies ezikungqongileyo, unika abadlali ukukhawuleza kwe-adrenaline eyenza imidlalo yevidiyo ibe mnandi! Ngelixa imeko ngokwayo ivakala iyonwabisa, kunzima ukuyifumana ngaphandle koncedo kwii-DayZ cheats ezifanelekileyo.
Nokuba ukhe waqhatha kwi-DayZ ngaphambili okanye ujonge ukwenza njalo okokuqala, i-Gamepron inokukubonelela ngako konke ukukopela okufunekayo ukuze uphumelele. Abanye abadlali baya kuba becinga ukuba ubenokwazi njani ukoyisa indawo yokuphembelela, kwaye abanye babo banokuzama ukukongeza njengomhlobo! Ngeempawu ezifana ne-DayZ aimbot, i-wallhack, i-ESP, kunye nezinye iindlela onokukhetha kuzo, ukusikwa kwethu kwe-DayZ ngokulula sisisombululo esinamandla esifumaneka kwiwebhu.
Ii-Hacks ezithathwa njenge "premium" zikhutshwa rhoqo, kodwa bambalwa kakhulu kubo abaya kuhlala kuloo mgangatho. Zonke izixhobo ezithengiweyo kwiGamepron ziqinisekisiwe ukuba ziyafezekisa imigangatho yakho emva koko ezinye, njengoko sisebenza kuphela nabaphuhlisi ababalaseleyo. Ukuchitha imali kwi-DayZ elungileyo akuyi kukuvumela ukonwabele umdlalo ngakumbi, kodwa kuya kunceda nje abadlali baphumelele ngokubanzi.
Ukhuseleko yeyona nto iphambili apha kwiWinThat War, njengoko besingafuni ukuba abasebenzisi bethu bavinjwe ngelixa begcothula izixhobo zeGamepron. I-hack yethu ye-DayZ iza nenqanaba eliphezulu lokhuseleko, ivumela abadlali ukuba babambe ngaphandle kokukhathazeka - akukho mntu uyavalwa xa bekopela besebenzisa i-Gamepron! Ukuba unayo iakhawunti yakudala okanye udiniwe nje kukujongana nokuvalwa, kuphela kukhahlo lwethu lwe-DayZ oluya kuba nokhuseleko olwaneleyo lokukunika uxolo lwengqondo. Ukuba konke oku kuvakala ngathi yinto onokuthi uyiqhele, ufumane ukufikelela namhlanje! Thenga isitshixo semveliso yokugenca kwethu kwe-DayZ kwaye uzive umahluko ngokwakho.
I-DayZ Wall Hack (i-ESP)
Ulwazi lomdlali weDayZ ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
DayZ Into ESP eneefilitha
DayZ izilumkiso zotshaba
Imowudi ye-DayZ yokutsiba super (akukho monakalo wokuwa xa uqalile ukusebenza).
Ithambo le-DayZ kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa.
Ukubuyiswa kwesinxephezelo seDayZ
yethuDayZ yimfumba Iimbonakalo
Umdlali weDayZ ESP
Umdlali wethu we-DayZ ESP ugqibelele ukugcina umkhondo wabachasi bakho. Zibone ngokuqina kunye nokukhanya okuphezulu ngokusebenzisa i-ESP (Ukuqonda okungakumbi kokuqonda).
Ulwazi loMdlali lukhetho oluya kukuvumela ukuba ufunde ngakumbi malunga nethagethi yakho. Jonga ukuba ngawaphi amagama abo, ezempilo, kwanemigama abayisebenzisayo yokuqhekeza iDayZ.
Into ye-ESP igqibelele kwabo bangathandi ukuchitha ixesha, njengoko kungekho sidingo sokujonga kwizakhiwo zokuphanga kwakhona.
I-DayZ Aimbot yethu ixhotyiswe kuphela ngeyona nto inamandla. Yenza nantoni na onokuyithanda kwi-DayZ ngokusebenzisa ii-DayZ cheats zethu!
Umkhondo weDayZ Bullet (osebenzayo kwimigama emifutshane naphakathi)
Ukungena kwidabi elifutshane (okanye eliphakathi)? Nika amandla ukuKhangelwa kweBhulethi kwaye ubone ngqo apho isibhamu sakho siya khona, uqinisekisa ukuba ujoliso lwakho luyafikelwa.
Ithambo le-DayZ kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa
Qwalasela i-DayZ Aimbot usebenzisa ithambo lethu kwaye ujonge iinketho eziphambili ezinokulungiswa, unike abasebenzisi bethu ithuba lokuzenzela iihacks zabo.
Iitsheki ze-DayZ aimbot ezibonakalayo
Iitshekhi ezibonakalayo zingasetyenziselwa ukunyanzela i-DayZ aimbot ukuba idubule iithagethi ezinokubonwa, kwaye ukunqande ukutshixela kwiintshaba ezikwiindawo ezikrokrisayo.
Ukuphinda ubuye yingxaki kwi-DayZ, njengoko izakunyanzela abadlali ukuba bahlengahlengise ngelixa badubula. Yisuse ngokupheleleyo usebenzisa iMbuyekezo yeCompensator yethu!
Inqaku lesilumkiso liya kwazisa abasebenzisi beMidlalo yeGrmron xa utshaba lusondele, okanye nokuba ijolise kwi-avatar yabasebenzisi.
Imowudi ye-DayZ super jump (akukho monakalo wokuwa xa uyenzileyo)
Umonakalo owayo awusayi kuphinda ulawule isiphumo semidlalo yakho, njengoko unako ukwenza indlela yokutsiba Super kwaye ukhubaze ukonakala ngokupheleleyo.
Ibhloko lesicatshulwa esithetha ngendlela iihacks zethu ezinokukunceda ngayo ukuba ube ngowona ubalaseleyo kulo mdlalo
I-DayZ ngumdlalo oya kuvuza oyena msebenzisi ubalaseleyo phantse ngalo lonke ixesha. Sebenzisa i-DayZ hack yethu kuya kuvula amandla akho okwenyani, njengoko nabadlali abaziingcali beya kuzibuza ukuba uza kubabetha njani. Nge-DayZ Aimbot yethu, iifoto zakho ziya kubulala ngalo lonke ixesha, ngelixa i-ESP / Wallhack ikugcina unolwazi. Yenza into elungileyo kwaye uthenge ukufikelela kwi-DayZ yethu namhlanje.
I-DayZ Hacks edumileyo kunye nokukhohlisa
I-DayZ ESP kunye neWallhack
Olunye u-DayZ Hacks kunye nokukhohlisa
Ezona ndawo zidumileyo ze-DayZ kunye nokukhohlisa ngokuqinisekileyo ziya kukunceda uphumelele imidlalo emininzi, njengoko ukufumana impumelelo kulo mdlalo kunxulumene nenqanaba lakho lesakhono ubukhulu becala. I-DayZ yenye yezona ndawo zidumileyo zomdlalo weqonga okhe wakhutshwa, kwaye nangona ikhutshiwe kwiminyaka embalwa edlulileyo, ihlala yenye yezona zinto zidumileyo apho. Xa ufuna ukonwabela amava akho edabi, usebenzisa indlela yethu yeDayZ sesona sisombululo sisiso- awunakhathazeka ngokuqokelela izixhobo kunye nokuphanga kwiindawo ezifanelekileyo, njengesixhobo esiya kuyikhathalela loo nto.
Ungasebenzisa amanqaku afakwe ngaphakathi kukhetho lwethu oludumileyo lwe-DayZ ukufumana inzuzo kuyo nayiphi na imeko, akunamsebenzi ukuba ngubani na lo mdlalo ubeka ngokuchasene naye. Ngelixa abanye abadlali beya kuxhomekeka kwithuba, uza kuya kwimidlalo yakho ye-DayZ usazi ukuba uloyiso lusendleleni.
I-aimbot yethu ye-DayZ yakhiwe ukusuka emhlabeni ukuya phezulu ukubandakanya zonke ezona zinto ziluncedo, ezinje ngokuBekwa phambili kwamathambo kunye nokhetho olongezelelekileyo lokukhetha. Awudingi ezona zixhobo zibalaseleyo kumdlalo xa ukwazi ukubetha kwindawo ekubulalayo kuyo yonke into oyenzileyo, yiyo loo nto abasebenzisi bengazukucinga ukusebenzisa enye i-DayZ hack. Asinakulinga ukuba abasebenzisi bethu bajongane ne-autot yokungabikho, njengoko lelona candelo libalulekileyo lesi sixhobo! Isibonelelo kuzo zonke izinto ezimangalisayo esizisebenzisileyo ukungena kwi-stellar DayZ aimbot yethu namhlanje ngokuthenga isitshixo semveliso!
Ukuhlengahlengisa useto lwakho kwenziwa lula kwimenyu yomdlalo ongaphakathi, eyenzelwe ukuvumela abasebenzisi abavela kwi-Gamepron ukuba bahlengahlengise iihacks zabo kubhabho. Awusayi kuphinda ube nezicwangciso ezichanekileyo ngaphambi kokuvula umdlalo wakho, okanye kufuneka uvale isicelo sokutshintsha izinto-unokuthembela kwimenyu yomdlalo wokujongana nazo zonke iimfuno zakho zokutshintsha.
I-ESP kunye neWallhacks ziyimfuneko kwimidlalo edlalwa ngokulwa, yiyo loo nto ukusebenzisa i-DayZ hack yethu kuya kukunceda ngaphezulu kwezinye iindlela ezininzi. Ngelixa phantse yonke into ekhohlisayo ye-DayZ izakuba nendlela ethile yokusebenza ne-ESP, sinokhetho oluninzi oluya kwenza uloyiso lungaphepheki. Abanye abadlali bazakujongana nemikhosi yeZombies, izixhobo ezimbi, kunye nabalingane abangazi ukuba kwenzeka ntoni; Ngombulelo, ukusebenzisa i-Gamepron kuyakuvumela ukuba uyiphephe loo nto. Sebenzisa inqaku le-ESP kuyakubhenca bobabini abadlali kunye nezinto eziluncedo, kunye nokuninzi kwezinye izinto eziguquguqukayo ukukugcina kwilogo.
I-Wallhacks ikwazisa apho zibekwe khona iintshaba ngaphambi kokuba ungene kwindawo, oko kuthetha ukuba awusoze wangena ungaboni. Chonga ezona zixhobo zibalaseleyo usebenzisa i-Item ESP, okanye funda nje okungakumbi malunga neentshaba zakho ngenqaku loMdlali we-ESP!
Inqaku leNyawo lingafunyanwa kuphela kwiGamepron, kwaye izakuvumela abadlali bethu beDayZ baphumelele phantse kwangoko (ngenxa yokuba inokuba yeyiphi na kwimeko efanelekileyo). Imephu ye-DayZ inkulu kakhulu kwaye ucinga ukuba apho iintshaba zifihle khona kunokuba nzima, kodwa ukusebenzisa zonke ii-DayZ cheats (kubandakanya inqaku leFotprint) kuya kufuneka kuveze nawuphina umntu okufutshane. Abasebenzisi banokwenza ukuba uphawu lweFointprint kwaye babone apho iintshaba zihamba khona emva kwabo, njengoko kuyakubakho uthotho lweenyawo ezikhokelela kwindawo yabo. Ukuzingela umdlali wakho kuye kwaba lula kakhulu! Awusayi kuphinda ujongane neentshaba zakho ngqo, njengoko inqaku leNyawo liya kukuvumela ukuba uzimele ezithunzini de ube ukulungele ukubetha.
Xa kufika ixesha lokulwa, unokwenza kwakhona Ukonakala okuphezulu ukubulala abachasi bakho ngokukhawuleza. Umgama usetyenziselwa ukubona ukuba ukufutshane kangakanani kwiintshaba!
Abadlali baya kujolisa kuphela kwezona ndawo zibulalayo kwiithagethi zabo xa uKonakaliswa okuphezulu kunikwe amandla, kukuvumela ukuba uchithe ixesha elincinci usilwa kunye nexesha elininzi lokuphumelela! Umgama ungasetyenziselwa ukubona ukuba ukufutshane kangakanani ekujolise kuyo ngelixa usebenzisa iFointprint, kodwa uthini ngezinye izinto ezibandakanyiweyo ngaphakathi? Ukuthandwa kwenqaku leRadar kunye nokususa kukwakhona kobu buqhetseba, obunika abadlali ithuba lokususa ezinye zezinto ezicaphukisayo zeDayZ. Umsi, ukubuyela umva, ukujijeka, kunye nezinye izinto zinokususwa xa ukhetha ukugcoba nathi kwiGamepron!
Ukhuseleko lwezixhobo zethu yinto enkulu ekufuneka uyiqwalasele, kuba uninzi lwabanye ababoneleli abakhathali malunga neenzame zabo zokulwa ukukopela njengoko kufanele. I-Gamepron ihlala izinikele ekugcineni umsebenzisi ekhuselekile, nokuba yeyiphi na inkohliso abafuna ukuyisebenzisa! Hlala ukhuselekile kwaye usebenzise kuphela ii-DayZ hacks ezithembekileyo ezijikeleze, ezifumaneka apha kwiGamepron.
I-DayZ Hacks imibuzo
Kutheni iDayZ Hacks yethu
Ii-hacks zethu ze-DayZ azinakubethwa, kwaye kungenxa yokuba besikhula kwaye sisebenzisana nabaphuhlisi abakumgangatho ophezulu okwethutyana. Xa ufuna ukubona iziphumo ngelixa usebenzisa ii-DayZ hacks ngoko nangoko, ezo zisimahla nezinexabiso eliphantsi azizukuwenza umsebenzi. Ukukopela ekunene kwaye usebenze neGamepron, asisoze sakuphoxa.
Kutheni iDayZ Aimbot yethu
Sebenzisa i-DayZ aimbot yethu ukufumana inzuzo enkulu ngaphezu kwabachasi bakho, njengoko ungasokuze uphinde uphoswe. Abanye abadlali baya kushiyeka basebenzise isakhono sabo ukuya phambili, kodwa unokwenza i-DayZ aimbot yethu kwaye ukhuphe iintshaba zakho ngonqakrazo olunye lwempuku. Musa ukubetha ujikeleze ityholo kwaye ubulale ngokungxama usebenzisa i-Gamepron.
Kutheni iDayZ ESP yethu
I-ESP yethu (ukuqonda okuNgezelelweyo kokuqonda) inika abasebenzisi ukufikelela kwiindlela ezininzi kunayo nayiphi na enye iDoZZ kwiwebhu ngoku. Ngelixa ezinye iindawo ziya kukuvumela ubone amathambo omdlali kwaye ayikho enye into, i-Gamepron ibonelela ngomsebenzisi ngakumbi xa kuziwa kukhetho lwe-ESP olunikezelwayo. Kutheni uhlala kwi-DayZ ESP?
Kutheni iDayZ Wallhack yethu
Ukudana yimvakalelo engaguquguqukiyo xa usebenzisa ii-wallhacks ezithengwe naphina ngaphandle kweGamepron. Ayisiyiyo nje kuphela ukuba i-DayZ wallhack yethu iya kukuvumela ukuba ubone iintshaba kude (kunye neendawo eziqinileyo / ezi-opaque), kodwa unokubona izinto kunye nokunye ngaphezulu koko. Ukuba uyasokola ukuphanga ezona zixhobo zibalaseleyo kumdlalo ngokungaguquguqukiyo, i-Item ESP yethu kunye ne-DayZ wallhack ziya kukunceda.
Kutheni iDayZ NoRecoil yethu
Ukubuyisa kunokuba ngumahluko phakathi kokuphumelela idabi kunye nokubaleka kwakho kunqunyulwe. Ukuphinda kulungele akufuneki ukuba uxelele indlela odlala ngayo umdlalo, yiyo loo nto similisele inqaku lokususa elinika amandla abasebenzisi ukuba balilahle ngokupheleleyo. Kulungile, ungasusa ukubuyela umva kusiko lwethu lwe-DayZ, unike abasebenzisi umfanekiso ochanekileyo ngakumbi. Yiloo nto esiyenzayo eGamepron!
Ungazikhuphela njani ezona hacks zeZ DayZ zibalaseleyo?
Unokuzikhuphelela zonke ezona zinto zibalaseleyo ze-DayZ kanye apha kwiGamepron, konke okufuneka ukwenze kukuzithengela isitshixo semveliso. Sihlengahlengise ukhuphelo kunye nenkqubo yofakelo ukugcina abasebenzisi bethu besezingqondweni, ngakumbi abo bangazange bayigqibe le nkqubo ngaphambili. Fumana ukufikelela namhlanje kwaye ukhuphele ezona cheats zibalaseleyo ze-DayZ ezifumaneka kwi-Intanethi! Hlala ukhuselekile kwaye ukhohlise nathi apha kwiGamepron.
Kutheni ii-DayZ hacks zakho zibiza kakhulu kunezinye?
Amaxabiso ethu abonisa inkonzo esiyibonelelayo, kuba ayisiyiyo nje into yokuba umnini wexabiso eliphantsi! Gamepron lunikezelwe cheats ekumgangatho ophezulu ezineempawu awuyi kuzifumana kwenye indawo. Ukhuseleko lwethu nalo alunakuthelekiswa nanto, njengoko sigcina abasebenzisi bekhuselekile ngokunika i-100% yokukhohlisa okungafunyanwanga kunye nakho konke ukukhutshwa-i-DayZ hack yethu ayizukuhluka! Kukho inani eliqingqiweyo leendawo zokubeka ezikhoyo nangaliphi na ixesha.
Khetha umda wexesha lakho ngokweemfuno zakho! Sinikezela ngemida yexesha elifanele ukulungelela nabani na, enika abasebenzisi beGamepron ubhetyebhetye ngokupheleleyo kumava abo. Unokukhetha ukuthenga usuku olu-1, i-1-iveki, okanye isitshixo semveliso seenyanga ezi-1 kuthi kwiGamepron. Abanye ababoneleli beenkonzo baya kunyanzela ukuba uzibophelele ixesha elide, kodwa asifuni ukunyanzela abasebenzisi ukuba benze nantoni na.
Kuhle DayZ yimfumba Iimbonakalo